Iimbono eziphambili zokuma ngaphandle kwiYouTube -YTpals
Inani labadali bemixholo likhula ngokucacileyo kwi-YouTube, kwaye phantse zonke i-niche ziyahlutha. Kwimeko enjalo, kuya kusiba nzima ngakumbi kubadali bemixholo emitsha ukwenza uphawu, njengoko kunzima kakhulu ukukhuphisana nabo bangaphezulu kwemfumba. Nangona kunjalo, ngokwamkela iindlela ezimbalwa, unokuqinisekisa ukuba ijelo lakho leYouTube livela kubakhuphisana nabo abasondeleyo kuwe. Kweli nqaku, siza kukuthatha ngezona zimvo ziphambili ze-YouTube zokunika ishaneli yakho ukonyusa okufunekayo. Ke, ngaphandle kokulibaziseka, masiqale.
1. Yazisa, kodwa ungalibali ukonwabisa
Uninzi lwabantu lukhangela ulwazi kwiYouTube ngokubhekisele kwizifundo ezahlukeneyo. Ke, ukuba nolwazi ngeevidiyo zakho kubalulekile. Kodwa okona kubaluleke nangakumbi kukuzonwabisa. Ke, qiniseka ukuba iividiyo zakho zinomdla wokuzonwabisa. Indlela elungileyo yokufezekisa oku kukongeza incoko yoburharha ngokusebenzisa ii-memes kunye neziqhulo.
2. Sebenzisa onke amanqaku e-YouTube
Kwakukho ixesha apho iYouTube yayivumela kuphela abasebenzisi ukuba bapapashe iividiyo ezinde. Nangona kunjalo, ngokwaziswa kweeShoti, umdlalo utshintshe kakhulu. Unako kwakhona ukulayisha imifanekiso amaxesha ngamaxesha ukwenza abaphulaphuli bakho bazi ijelo lakho. Iya kuqinisekisa ukwahluka kumxholo wakho, okt awuyi kubambeka ekwenzeni uhlobo olunye lweevidiyo.
3. Qaphela okwenziwa ngabakhuphisana nabo, kunye nezinto abangazenziyo
Eyona ndlela yokuhamba phambili kukhuphiswano lwakho olusondeleyo kuYouTube kukujonga iividiyo zabo ukuze wazi malunga namandla abo kunye nobuthathaka babo. Zama ukufaka amandla abo kumxholo wakho, ngelixa uphucula ubuthathaka babo. Umzekelo, ukuba uyi-vlogger yohambo, ungajonga abo ukhuphisana nabo ukuba bajonge izinto abangazigubungeliyo kwiividiyo zabo. Ukwenza iividiyo zakho zahluke, unokuzigubungela ezo zinto kwaye uhambise umxholo onolwazi ngakumbi kubabukeli bakho.
4. Ukuphucula izakhono zakho zokuhlela
Ukuhlela okugqwesileyo kunokuguqula iividiyo ezilula zibe yimisitho yolonwabo. Ke, ukuba awukhathalelanga kuhlelo, malunga nexesha owenze ngalo. Kwakhona, ngumkhwa omkhulu ukufunda ngamanye amaqhinga okuhlela abekwa ngabakhuphiswano bakho. Ngokuqinisekileyo, kuya kuthatha ixesha ukuqonda ezo zakhono zokuhlela. Kodwa nje ukuba uqalise, unokuyiphucula kuphela.
5. Khetha izihloko ezinomtsalane endaweni yesiqhelo
Kule mihla, izihloko zohlobo oluqhelekileyo azisebenzi nje. Kuphela zii-YouTubers ezimiselweyo ezinokusebenzisa izihloko zohlobo oluqhelekileyo ngaphandle koloyiko lokuphulukana nokubukela. Nokuba kunjalo, bahlala bekhetha izihloko ezinengxoxo yokuncokola kubo. Umzekelo, i-vlogger yohambo inokudala isihloko ngokusekwe kwelinye lamava akhe kwindawo ethile yabakhenkethi. Oku kudala umdla ezingqondweni zabaphulaphuli, nto leyo eyenza ukuba kube lula kubo ukuba babukele iividiyo.
6. Buyekeza abaphulaphuli ngenkxaso yabo
Ukupha kunye nemivuzo kuyamangalisa ekugcineni inkxaso yabaphulaphuli bakho ixesha elide. Umzekelo, yenza into ekhethekileyo kubalandeli bakho emva kokuba ubethe ibakala elifana ne-500 okanye i-1000 ababhalisile kwi-YouTube. Inokuba yinto elula njenge-Q ephilayo kunye neseshoni apho unxibelelana nababhalisi bakho okanye inokuba yinto ethe kratya. Ukubeka ngokulula, xa usenza umzamo wokunxibelelana nabaphulaphuli bakho, baya kwenza iinzame zokusasaza igama malunga nezinto ozenzayo kwiYouTube.
Ke, ezi zezinye zeengcebiso ekufuneka uzazi zokwenza ukuba ijelo lakho le-YouTube ligqame phakathi kwalo lonke ukhuphiswano oluqatha. Ukuba ufuna ababhalisi be-YouTube basimahla ukuba bakhulise ijelo lakho le-YouTube ngokukhawuleza, cinga ngokujonga www.etypoker.com.
Iimbono eziPhezulu zokuma ngaphandle kwiYouTube ngababhali beYTpals, 14 October 2021
Iindlela ezisebenzayo zokuThengisa ku-YouTube kwiShishini elincinci
Amaqonga evidiyo abe sisixhobo esinamandla kwi-Intanethi kwintengiso yeshishini elincinci, kwaye iYouTube iziphuhlisile njengenye yezona zixhobo zibalaseleyo zentengiso kushishino lweendaba zentlalo. Ngaphezulu kwe…